Starting from the Cirata floating solar power plant mega-project in West Java which became the largest solar power plant in Southeast Asia, solar power plant Musi Green Hybrid, တောင်ဆူမာတြားရှိပုဂ္ဂလိကပါတီများအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရလဒ် small-scale rooftop solar power plant DKI Jakarta နှင့် West Java ကဲ့သို့မြို့ကြီးများကိုပျံ့နှံ့သွားသည်။ ဤစီမံကိန်းများကအစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိကပါတီများသည်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုတက်ကြွစွာလျော့ပါးစေရန်စတင်လုပ်ဆောင်နေကြောင်းပြသသည်။
However, talks on plans to developasolar power plant in public very rarely touch on aspects of air pollution. In fact, that aspect is enough to affect the level ငွေသွင်းငွေထုတ်၏ သို့မဟုတ်နေရောင်ခြည်ထိတွေ့မှုသည်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစက်ရုံများထုတ်လုပ်မှုထိရောက်မှုကိုလျော့ကျစေနိုင်သည်။
Reduced sun exposure ultimately reduces the potential capacity of solar panels that are already installed. The reduction in solar power plant power capacity per 1-kilowatt peak (KWp) will reduce the stun production potential by တစ်နှစ်လျှင်တစ်နာရီ ၅၇ ကီလိုဝပ်ခန့်
ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုပမာဏ ငွေစုခြင်း reduction due to PM 2.5 in Jakarta is not yet known. However, in New Delhi, India, the potential loss reached the US $ 20 million or equivalent to Rp 285 billion per year. While in Beijing, China, it is predicted to lose US $ 10 million or around Rp 142 billion for roof solar power plants with စွမ်းရည် ၁၀၀၀ မဂ္ဂါဝပ် (MW)
In major cities such as Jakarta, the effective use of rooftop solar power plants depends largely on the reduction of motor vehicles. Because about ဂျကာတာ၏လေထုထဲတွင်အမှုန်အမွှား ၁၃-၄၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လွှတ်မှုမှလာသည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်မော်တော်ယာဉ်အရေအတွက်တိုးတက်လာသည် တစ်နှစ်လျှင် ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိသည်။ This trend risks further reducing power production from rooftop solar power plants in the future.
Compared to DKI Jakarta, this risk is very high – especially in large-scale solar power plants located in areas prone to forest and land fires. For example in musi၊ South Sumatra၊ နှင့် Riau ရှိ Bengkalis regency
The price of roof solar power plant installation in Indonesia is still quite high when compared to the price of global solar power plant installation. မှအစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကိုအခြေခံသည် အမေရိကန်အမျိုးသားပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ဓာတ်ခွဲခန်း (NREL)၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်သုတေသနအင်စတီကျုသည်အင်ဒိုနီးရှား၌ဆိုလာပြားများ၏ပျမ်းမျှလျှပ်စစ်ကုန်ကျစရိတ်သည်အရှေ့တောင်အာရှတွင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီးမဂ္ဂါဝပ်တစ်နာရီလျှင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၆၅ ခန့်ရှိသည်။ ဒုတိယအမြင့်ဆုံး LCOE အနေအထားကိုစင်ကာပူနိုင်ငံကသိမ်းပိုက်ထားပြီး US $ 2019 / MWh (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် Rp 165 million)
Currently, the government plans to incentivize people to use rooftop solar power plants with ထုတ်လုပ်သူများထံသို့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစျေးနှုန်းများအတွက်မက်လုံးတစ်ခုမူဝါဒ(ကျွေးမွေးခွန်) သို့မှသာသန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်ကို အသုံးပြု၍ တွန်းလှန်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်မလုံလောက်ပါဘူး။ အစိုးရသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္fromမှထုတ်လွှတ်မှုများကိုတင်းကျပ်ရန်မျှော်မှန်းထားပြီးလေထုညစ်ညမ်းမှုအဆင့်များလျော့ကျရန်မျှော်လင့်ထားသည်။
That analysis is needed because of the considerable solar power plant development target: about 328.8 မဂ္ဂါဝပ်။
This article was originally published by The conversation, on September 08, 2021, in Bahasa, Indonesia and has been republished in accordance with the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives ၄.၀ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြည်သူ့လိုင်စင်။ သင်သည်မူရင်းဆောင်းပါးကိုဖတ်နိုင်သည် ဒီမှာမရ။ ဤဆောင်းပါး၌ဖော်ပြသောအမြင်များသည်စာရေးသူတစ် ဦး တည်းသာမဟုတ်ဘဲ WorldRef ၏အမြင်များဖြစ်သည်။